သငျ့ရဲ့(၉)လသား ကလေးကို ဘယျအစားအစာတှေ မကြှေးသငျ့ဘူးလဲ?
Home Child Care သငျ့ရဲ့(၉)လသား ကလေးကို ဘယျအစားအစာတှေ မကြှေးသငျ့ဘူးလဲ?
သငျ့ရဲ့ (၉)လသားကလေးကို မကြှေးသငျ့တဲ့ အစားအစာတဈခြို့ရှိပါတယျ။ ဒီအသကျအရှယျမှာ သူတို့ရဲ့အစာခွစေနဈက အစားအစာ မြိုးစုံအတှကျ အဆငျသငျ့မဖွဈသေးပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ရှောငျကွဉျရမယျ့အရာတှကေို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
သငျ့ကလေးကို မကြှေးသငျ့တဲ့အစားအစာတဈခြို့ရှိပါတယျ။ ဒါအပွငျ့ ကလေးတှရေဲ့ဘဝ ပထမဆုံးလတှမှော စားသုံးတဲ့အစားအစာတှဟော အာဟာရဖွဈရပါမယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မိခငျနို့ခြိုတိုကျကြှေးခွငျးနှငျ့အတူ စတငျတာက အကောငျးဆုံးပါ။ မိခငျနို့က သူတို့လိုအပျသမြှ အာဟာရတှကေို ပေးစှမျးတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ထို့နောကျ အစိုငျအခဲအစားအစာမြားနဲ့ မိတျဆကျပေးဖို့ အခြိနျရောကျလာတဲ့အခါ သငျ့တငျ့လြောကျပတျတဲ့ ဖှံဖွိုးမှုအတှကျ သူတို့လိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျတှေ ပါဝငျသော အစားအစာမြားဖွဈရပါမယျ။ ကလေးတှကေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကွပမေယျ့ ကလေးအမြားစုက ၉လအရှယျမှာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ၊ အသီးအနှံ၊ ပဲအမြိုးမြိုးနဲ့ အသားငါးတှကေို စားနကွေပါပွီ။ သငျ့ကလေးရဲ့ အစာခွစေနဈက ကနျြးမာရငျ အာဟာရတှကေ သူတို့ကို ကနျြးမာစှာ ကွီးပွငျးဖို့ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ သို့သျော အစာကွဖေို့ ကလေးတှအေတှကျခကျခဲပွီး တခွားရောဂါမြားကို ဖွဈပျေါစနေိုငျတဲ့ ဓါတျမတညျ့တုံ့ပွနျမှုမြားဖွဈပှားနိုငျတဲ့ အစားအစာတှရှေိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကလေးကို မကြှေးရမယျ့အစားအစာမြားနှငျ့ ပတျသတျပွီး သတိထားသငျ့တဲ့ အစားအစာအခြို့ကို အောကျမှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
အသကျ ၉လအရှယျမှာ သူတို့ရဲ့ အူလမျးကွောငျးအငျဇိုငျးတှကေ သူတို့ရဲ့အမွငျ့ဆုံးဖှံဖွိုးတိုးတတျမှုအဆငျ့ကို မရောကျရှိသေးပါဘူး။ ကလေးတဈယောကျဟာ ဒီအသကျအရှယျမှာ ဒီနို့အမြိုးအစားတှထေဲက ပရိုတိနျးတှကေို အစာမခွနေိုငျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ နို့တှမှော သူတို့ရဲ့ကြောကျကပျကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ သတ်တုဓါတျတှေ ပါဝငျပါတယျ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှမှော မြားသောအားဖွငျ့ အကြိုးပွုနိုကျထရိတျဓါတျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ Nitrates(နိုကျထရိတျဓါတျ)က ခန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျးမှာ nitrites(နိုကျထရိုကျ) အဖွဈသို့ အသှငျပွောငျးသှားပါတယျ။ ပမာဏမြားပွားတဲ့အခါ နိုကျထရိုကျက သှေးဆဲလျမြားဖွငျ့ အောကျဆီဂငျြရဲ့ မှနျကနျတဲ့ ဖွနျ့ဖွူးမှုကို သကျရောကျစတေဲ့ ရောဂါတဈခုကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈလာလြှငျ သငျ့ကလေးရဲ့အသားအရကေ ပွာနှမျးနှမျးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ကလေးရဲ့ကြောကျကပျ တဈခုခုဖွဈတာက ဆား(အငနျ)မြားလှနျးလို့ ဖွဈပါတယျ။ ဆိုဒီယံမြားပွားတာက ကြောကျကပျကို ထိစတောကွောငျ့ ကလေးကိုတိုကျကြှေးမယျ ဟငျးခြိုတှမှောတောငျ ဆားအမြားကွီးမထညျ့သငျ့ပါဘူး။ ဆားကို တတျနိုငျသမြှရှောငျပါ။
ခြိုခဉျြတှေ၊ ဖြျောရညျတှနေဲ့ တခွားစားသောကျကုနျတှမှောထညျ့ထားတဲ့ သကွားက သှေးအတှငျးဂလူးကို့ဈအဆငျ့ကို သိသိသာသာ အတတျအကဖြွဈစပေါတယျ။ သငျ့ကလေးရဲ့အစားအစာထဲမှာ အခြိုလြော့ခငျြရငျ ကွိတျခထြေားတဲ့ ငှကျပြောသီး သို့မဟုတျ မိခငျနို့ရညျကို သုံးပါ။ အသီးထဲမှာတှရှေိ့ရတဲ့ သဘာဝသကွားဓါတျကိုစားသုံးတာက ကလေးအတှကျ ပိုကောငျးပါတယျ။
အမြားအားဖွငျ့ ပြားရညျမှာ ၉လသားကလေးတဈယောကျရဲ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျဖွဈစတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ ပါဝငျပါတယျ။ အစာနဲ့မတညျ့တာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သကွား၊ ကဖိနျးဓါတျနှငျ့ တခွားအပိုထညျ့ထားတဲ့အရာတှကွေောငျ့ ဆိုဒါနှငျ့ တခွားအခြိုရညျတှကေ ကလေးတဈယောကျအတှကျ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ သူတို့က ကလေးရဲ့အစာအိမျကို ထိခိုကျစနေိုငျပွီး စိတျလှုပျရှား ဂနာမငွိမျခွငျးနှငျ့ အိပျစကျခြိနျ ပွောငျးလဲခွငျးတို့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သူတို့မှာ တခွားဓါတျသတ်တုမြားနှငျ့ အာဆငျးနဈ ပွငျးအား မွငျ့မားစှာ ပါဝငျတာကွောငျ့ ၁နှဈအောကျကလေးတှကေို ဆနျနို့မပေးဖို့ အကွံပွုလိုပါတယျ။ အသကျကွီးတဲ့ကလေးတောငျမှ ဒါကိုအသငျ့အတငျ့ပဲ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
၈။ မီးဖုတျထားတဲ့ အစားအစာတှေ
ကိတျမြား၊ ဖုတျထားတဲ့မုနျ့မြား၊ အာလူးခဈြပျတှကေဲ့သို့ အာဟာရဓါတျနညျးတဲ့အစားအစာတှမှော ဆားနှငျ့ သကွားတှေ ထညျ့ထားပွီး ကယျမီကယျပမာဏကွီးမားတာကွောငျ့ ကလေးတှကေို ကြှေးဖို့ အကွံမပွုပါဘူး။
ဥတှကေ ဓါတျမတညျ့တုံ့ပွနျမှု အမြိုးအစားအတျောမြားမြားကို ဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။ ကလေးကိုစကြှေးမယျဆိုရငျ အနှဈကိုအရငျကြှေးတာက အကောငျးဆုံးပါ။ လအနညျးငယျလောကျမှ ဥအကာကို မိတျဆကျပေးပါ။
ကောကျညငျးနဲ့လုပျထားတဲ့ အစားအစာတှေ၊ ပီကတှေေ၊ ပဲလှျောတှေ၊ ဂယျြလီ ပြော့အိအိသကွားလုံးကဲ့သို့ စေးကပျတဲ့အစာအစာတှကေ ကလေးရဲ့အာခေါငျမှာကပျနိုငျ/ လညျခြောငျးမှာတဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပီကတှေေ၊ သကွားလုံးတှမှော ဓါတုပစ်စညျးတှေ ၊သကွားတှပေါဝငျတာကွောငျ့ ကလေးအတှကျ အန်တရာယျရှိနိုငျပါတယျ။
လညျခြောငျးထဲမှာ နငျခွငျးကို တားဆီးဖို့
အစားအစာကြှေးတဲ့အခါမှာ သတိထားပေးပါ။ ကလေးမှာ အစာနငျတာ၊ အစာသီးတာတှေ ဖွဈနိုငျခြေ အရမျးမြားပါတယျ။ကလေးကို အစားအစာ ပေးတဲ့အခါ ကလေးရဲ့တဈကိုကျစာကိုသာပေးပါ။ အစားအစာအမြားစုကို အနှဈတိုကျပွီး၊ ကွိတျခပြွေီးမှ ကြှေးသငျ့ပါတယျ။သူတို့ကို သဈသီးတို့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတို့ အတုံးလိုကျကြှေးမယျဆိုရငျ ½ inch ထကျမကြျောစပေါနဲ့။ ကလေးကို အဆော့မကျနတေုနျး၊ လှဲနတေုနျးမှာ အစာမကြှေးပါနဲ့။ နငျတတျလို့ပါ။
ကလေးဆရာဝနျတှကေ အလာ့ဂဈြဖွဈနိုငျမယျ့ အစားအစာမြားကို ကလေးကိုကြှေးဖို့ တဈနှဈလောကျစောငျးဆိုငျးဖို့ အကွံပွုကွပါတယျ။ တဈခြို့က မွပေဲနဲ့ ဓါတျမတညျ့တာတို့ ရှိတတျကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဓါတျမတညျ့မယျ့ မြိုးရိုးဗီဇရှိလြှငျ သူတို့ရဲ့တုံ့ပွနျမှုကို အနီးကပျစောငျ့ကွညျ့ရငျး တဖွညျးဖွညျးမှ ဒီအစားအစာမြားကို မိတျဆကျဖို့ အကွံပွုထားပါတယျ။
သင့်ရဲ့(၉)လသား ကလေးကို ဘယ်အစားအစာတွေ မကျွေးသင့်ဘူးလဲ?
သင့်ရဲ့ (၉)လသားကလေးကို မကျွေးသင့်တဲ့ အစားအစာတစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့အစာခြေစနစ်က အစားအစာ မျိုးစုံအတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အရာတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကို မကျွေးသင့်တဲ့အစားအစာတစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင့် ကလေးတွေရဲ့ဘဝ ပထမဆုံးလတွေမှာ စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေဟာ အာဟာရဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အတူ စတင်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ မိခင်နို့က သူတို့လိုအပ်သမျှ အာဟာရတွေကို ပေးစွမ်းတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် အစိုင်အခဲအစားအစာများနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ ဖွံဖြိုးမှုအတွက် သူတို့လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေ ပါဝင်သော အစားအစာများဖြစ်ရပါမယ်။ ကလေးတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြပေမယ့် ကလေးအများစုက ၉လအရွယ်မှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ၊ ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ အသားငါးတွေကို စားနေကြပါပြီ။ သင့်ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်က ကျန်းမာရင် အာဟာရတွေက သူတို့ကို ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်းဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အစာကြေဖို့ ကလေးတွေအတွက်ခက်ခဲပြီး တခြားရောဂါများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ဓါတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကလေးကို မကျွေးရမယ့်အစားအစာများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သတိထားသင့်တဲ့ အစားအစာအချို့ကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အသက် ၉လအရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့ အူလမ်းကြောင်းအင်ဇိုင်းတွေက သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖွံဖြိုးတိုးတတ်မှုအဆင့်ကို မရောက်ရှိသေးပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဒီနို့အမျိုးအစားတွေထဲက ပရိုတိန်းတွေကို အစာမခြေနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် နို့တွေမှာ သူတို့ရဲ့ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ များသောအားဖြင့် အကျိုးပြုနိုက်ထရိတ်ဓါတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Nitrates(နိုက်ထရိတ်ဓါတ်)က ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာ nitrites(နိုက်ထရိုက်) အဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ ပမာဏများပြားတဲ့အခါ နိုက်ထရိုက်က သွေးဆဲလ်များဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဖြန့်ဖြူးမှုကို သက်ရောက်စေတဲ့ ရောဂါတစ်ခုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာလျှင် သင့်ကလေးရဲ့အသားအရေက ပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကလေးရဲ့ကျောက်ကပ် တစ်ခုခုဖြစ်တာက ဆား(အငန်)များလွန်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒီယံများပြားတာက ကျောက်ကပ်ကို ထိစေတာကြောင့် ကလေးကိုတိုက်ကျွေးမယ် ဟင်းချိုတွေမှာတောင် ဆားအများကြီးမထည့်သင့်ပါဘူး။ ဆားကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။
ချိုချဉ်တွေ၊ ဖျော်ရည်တွေနဲ့ တခြားစားသောက်ကုန်တွေမှာထည့်ထားတဲ့ သကြားက သွေးအတွင်းဂလူးကို့စ်အဆင့်ကို သိသိသာသာ အတတ်အကျဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့အစားအစာထဲမှာ အချိုလျော့ချင်ရင် ကြိတ်ချေထားတဲ့ ငှက်ပျောသီး သို့မဟုတ် မိခင်နို့ရည်ကို သုံးပါ။ အသီးထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့ သဘာဝသကြားဓါတ်ကိုစားသုံးတာက ကလေးအတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။
အများအားဖြင့် ပျားရည်မှာ ၉လသားကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အစာနဲ့မတည့်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သကြား၊ ကဖိန်းဓါတ်နှင့် တခြားအပိုထည့်ထားတဲ့အရာတွေကြောင့် ဆိုဒါနှင့် တခြားအချိုရည်တွေက ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့က ကလေးရဲ့အစာအိမ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှား ဂနာမငြိမ်ခြင်းနှင့် အိပ်စက်ချိန် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့မှာ တခြားဓါတ်သတ္တုများနှင့် အာဆင်းနစ် ပြင်းအား မြင့်မားစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ၁နှစ်အောက်ကလေးတွေကို ဆန်နို့မပေးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ကလေးတောင်မှ ဒါကိုအသင့်အတင့်ပဲ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
၈။ မီးဖုတ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ
ကိတ်များ၊ ဖုတ်ထားတဲ့မုန့်များ၊ အာလူးချစ်ပ်တွေကဲ့သို့ အာဟာရဓါတ်နည်းတဲ့အစားအစာတွေမှာ ဆားနှင့် သကြားတွေ ထည့်ထားပြီး ကယ်မီကယ်ပမာဏကြီးမားတာကြောင့် ကလေးတွေကို ကျွေးဖို့ အကြံမပြုပါဘူး။
ဥတွေက ဓါတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှု အမျိုးအစားအတော်များများကို ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးကိုစကျွေးမယ်ဆိုရင် အနှစ်ကိုအရင်ကျွေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ လအနည်းငယ်လောက်မှ ဥအကာကို မိတ်ဆက်ပေးပါ။
ကောက်ညင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ပီကေတွေ၊ ပဲလှော်တွေ၊ ဂျယ်လီ ပျော့အိအိသကြားလုံးကဲ့သို့ စေးကပ်တဲ့အစာအစာတွေက ကလေးရဲ့အာခေါင်မှာကပ်နိုင်/ လည်ချောင်းမှာတစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပီကေတွေ၊ သကြားလုံးတွေမှာ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ၊သကြားတွေပါဝင်တာကြောင့် ကလေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
လည်ချောင်းထဲမှာ နင်ခြင်းကို တားဆီးဖို့
အစားအစာကျွေးတဲ့အခါမှာ သတိထားပေးပါ။ ကလေးမှာ အစာနင်တာ၊ အစာသီးတာတွေ ဖြစ်နိုင်ချေ အရမ်းများပါတယ်။ကလေးကို အစားအစာ ပေးတဲ့အခါ ကလေးရဲ့တစ်ကိုက်စာကိုသာပေးပါ။ အစားအစာအများစုကို အနှစ်တိုက်ပြီး၊ ကြိတ်ချေပြီးမှ ကျွေးသင့်ပါတယ်။သူတို့ကို သစ်သီးတို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ အတုံးလိုက်ကျွေးမယ်ဆိုရင် ½ inch ထက်မကျော်စေပါနဲ့။ ကလေးကို အဆော့မက်နေတုန်း၊ လှဲနေတုန်းမှာ အစာမကျွေးပါနဲ့။ နင်တတ်လို့ပါ။
ကလေးဆရာဝန်တွေက အလာ့ဂျစ်ဖြစ်နိုင်မယ့် အစားအစာများကို ကလေးကိုကျွေးဖို့ တစ်နှစ်လောက်စောင်းဆိုင်းဖို့ အကြံပြုကြပါတယ်။ တစ်ချို့က မြေပဲနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာတို့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဓါတ်မတည့်မယ့် မျိုးရိုးဗီဇရှိလျှင် သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရင်း တဖြည်းဖြည်းမှ ဒီအစားအစာများကို မိတ်ဆက်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
Next articleသငျ့ရဲ့ကလေး အရပျရှညျပွီး မွနျမွနျဖှံ့ဖွိုးစဖေို့ အကောငျးဆုံးအစားအစာ(၁၀) မြိုး